“सेतो बाघ” अब पर्दामा | Sima Pari
Home / Entertainment / “सेतो बाघ” अब पर्दामा
“सेतो बाघ” अब पर्दामा
स्व. डायमण्ड शमशेर राणाको अमर कृति ‘सेतो बाघ’ लाई अब पर्दामा हेर्न पाईने भएको छ । निकै चर्चित रहेको ऐतिहासिक उपन्यास ‘सेतो बाघ’मा आधारित मेगा सिरियल र कथानक चलचित्र दुबै बन्ने भएको छ ।
चलचित्रको निर्देशन बरिष्ठ फिल्मकर्मी नीर शाहले गर्नेछन् । दुईबर्षे प्रिप्रोडक्सनको काम पछि चलचित्र र सिरियल दुबैमा ‘सेतो बाघ’लाई उतार्न लागिएको हो । श्रीपञ्चमीको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौं थापाथलीस्थित पाञ्चायन प्राङ्गणमा आयोजित एक कार्यक्रममा चलचित्र निर्माणको औपचारिक घोषणा गरिएको हो ।
चलचित्र र सिरियल दुबैको सुटिङ्ग फागुनको पहिलो हप्तादेखि सुरु गरिने जानकारी गराईएको छ । निर्माण युनिटका अनुसार सिरियल ९१ भागको हुनेछ भने चलचित्र २ घण्टा ३० मिनेटको हुनेछ । “यो मेघा सिरियललाई उपन्यासको फोटोकपीको रुपमा उतार्ने योजना छ” निर्देशक शाहले भने “चलचित्रमा भने जंगबहादुर राणाको अन्तिम ३० दिनको कथालाई देखाईनेछ ।” चलचित्र र फिल्म दुबैलाई जिवन्त र ऐतिहासिक देखाउन कुनै कसर नछाडिने पनि उनले बताए । चलचित्रको बजेट करिब एक करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
चलचित्रको सुटिङ्ग काठमाडौं, चितवन र मकवानपुरमा गरिनेछ । डेढ महिनामा सुटिङ्ग सक्ने लक्ष्य लिईएको यो प्रोजेक्टका कलाकारहरु सबै नयाँ छन् । अडिसन लिएर चलचित्रका कलाकारहरुको छनौट गरिएको हो ।
अन्जना कट्टेल, प्रियंका आचार्य, प्रमिला थापा, विनशा सुवेदी, राजु राउत, गजेन्द्र घले, राम राजवंशी, ओम प्रकास निरौला, भरत गुरागाई, पर्वत राज झा, रविन बिकलगायतका अन्य धेरै कलाकारहरुको अभिनय चलचित्रमा हेर्न पाईनेछ । चलचित्रको निर्माण मन्जेश्री राज्यलक्ष्मी राणा, पुरण राणा, रविन्द्र शमशेर राणा र डा. ख्याती राणा शाहले मिलेर गर्दै छन् । चलचित्रमा संगीत शम्भुजित बाँसकोटाको रहनेछ भने सञ्जय लामाले यो चलचित्र खिच्नेछन् ।
भेषभुषा संयोजन नीरा राणाको रहने यस चलचित्रमा ब्यबस्थापनको जिम्मेवारी गोविन्द तिमिल्सिनाले सम्हाल्ने छन् । बिषेश भुमिकामा चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष धर्मेन्द्र मरवैता ‘पप्पु’ पनि यो चलचित्रमा देखा पर्नेछन् ।
Previous: केपी ओली एमाले संसदीय दलको नेता
Next: सचिन ‘भारत रत्न’बाट सम्मानित